E kpughere nkọwa mbụ nke Samsung Galaxy A20s Gam akporosis
E kpughere nkọwa mbụ nke Samsung Galaxy A20s
Samsung etinyela ọtụtụ ịhụnanya n'ime usoro nke smartphones site na Galaxy A usoro, nke mere na ọ tọhapụrụ ọtụtụ nsụgharị ọhụrụ nke ọtụtụ ụdị mbụ nke mere ya. Site na itinye mkpụrụedemede ("e" ma ọ bụ "" s ") na nomenclature nke njedebe nke ezinụlọ a, ụlọ ọrụ South Korea na-eji ya eme ihe iji megharịa ma melite njirimara na njirimara teknụzụ nke ngwaọrụ ọ bụla.
El Galaxy A20 Ọ bụ ọdụ ọhụrụ ga-amalite ụdị ọhụụ nke onwe ya n'oge na-adịghị anya. Nke a bụ ihe TENAA na-atụ aro anyị na ndepụta ọhụrụ ya, nke ọ bipụtara n'oge na-adịbeghị anya na nchekwa data ya. Ọ bụ kwuru na nke a bụ nke Galaxy A20s, mobile nke anyị na-ezo aka ugbu a na nke ahụ ga-amalite.
Certificlọ ọrụ asambodo ndị China kwadoro njikwa Samsung na aha koodu ahụ SM-A2070. Dị ka ihe ọ kpughere, Galaxy A20s pụtara ìhè enweelarị nnabata ya dị iche iche iji ree ya na mpaghara ndị China. Tụkwasị na nke a, ọ bụrụ na anyị atụkwasị obi n'ihe osise ndị ahụ o wepụtara, anyị nwere ike ịsị na anyị na-eche ihu igwe na-adọkpụ nke yiri nke ahụ Galaxy M30. Otú ọ dị, njirimara ya erubeghị nkọwa zuru ezu na ikpo okwu.
Samsung Galaxy A20s dị na TENAA
Na mmepe ọzọ na-adịbeghị anya e kpughere ya ihe nlere a gha egosiputa ahia na ngosi ngosi nke Infinity-V nke 6.49 inch nke nwere ihe ngosi udiri mmiri., otu octa-core 7884nm 1,6GHz octa-core Exynos 14 SoC dị na Galaxy A20, 4GB RAM na 64GB nke oghere nchekwa, nke nwere ike ịgbasa na kaadi microSD ruo 512 GB.
Ọnwụ ahụ enweghị nkọwa na nkọwapụta igwefoto n'oge a, mana ederede TENAA na-egosi nke ahụ A kwadebere ya n'ụzọ nwere igwefoto igwefoto atọ na-acha ọkụ ọkụ. Ọzọkwa, a na-ekwu na ọ ga-ebu batrị na-akụda mmụọ nke naanị ikike 3,000 mAh nke dị obere, ma e jiri ya tụnyere Galaxy A20, nke bụ 4,000 mAh.
A na-emepụta Galaxy A20e na Spain
The smartphone ga-abịa-ebu na gam akporo achịcha, a anụ ahụ mkpisiaka agụ na azụ, Bluetooth 4.2 Njikọta, sọrọ SIM 4G LTE nkwado, a USB odori n'ọdụ ụgbọ mmiri, na a 3.5mm n'ọdụ ụgbọ mmiri. Akụkụ ya bụ 163.31 x 77.52 x 7.99 mm, dị ka TENAA si kwuo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » E kpughere nkọwa mbụ nke Samsung Galaxy A20s
Huawei P30 Pro ga-ebido agba ọhụrụ abụọ
A na - emelite Skype maka gam akporo site na ịgbakwunye ibe edokọbara, ozi ederede na ndị ọzọ